Kismaayo News » Aw Libaax oo Balad Xaawo tagay
Aw Libaax oo Balad Xaawo tagay
Kn: Waxaa manta Magaalada Balad xaawo ee Gobolka gedo soo garay Wafdi balaran oo u hogaaminayo Gudomiyaha Ahlusunnada Konfureed Sh . Maxamed Maxamuud Yusuf Aw-libaax ayado Wafdigaan ay ka mid ahayeen Masuliyin ka tirsan Gudiga Farsamada Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo.
Wafdigaan ayaa waxay saaka diyaarad qaas ah ka soo qaday Garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose waxaana ay manta galabnimadii soo gareen Magaalada Balad Xaawo ee Gobolka gedo.
Wafdigaan oo ka kooban Xubno mudooyinkii ugu danbeeyay ku mashquulsanaa Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo ayaa waxa Magaalada Baladxaawo ku soo dhaweeyay Maamulka Ahlusunna Waljamaaca ee Magaalada Baladxaawo iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada Dagmada Balad Xaawo oo ay horkacayaan Ururada Haweenka iyo kuwa arimaha Bulshada.
Soo dhaweyn ka dib ayaa waaxa Wafdiga loo galbiyay Hoygi logu tala galay in wafdigaani Balad xaawo ka dagaan waxaana halkaas durba ka biloway kulamo kala warqaadasho ah oo ay yeelanayaan Saraakisha Ahlusunnada Konfuured iyo Gudomiye Sh. Maxamed Aw-libaax.
Ma cadda waxa Shirarka u bilowday Masuliyinti Maamulka Balad xaawo iyo Gudomiyaha Ahlusunna Waljamaca ay ku saabsanyihiin balse warar hoose oo ay heshay warbaahinta ayaa waxaay shegayaan in Gudomiye Aw-libaax u saraakisha Maamulka Balad xaawo ka waraysanayo sida ay u socdan howlaha Maamulka Balad Xaawo, Sidoo kale Aw-libaax ayaa waxaa uu Warbixin ku saabsan waxa uga soo qabsoomay socdaalkii u ku tagay Kismaayo siinaya Saraakisha Ahlusunnada Konfureed.
Wafdigaan oo asagu ku sugnaan doona gobolka mudo ayaa waxaa lagu wadaa in ay dhawaan ka hadlaan ujeedada Socdaalkooda iyo Halka ay marayso Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo oo ayadu dib loo dhigay ilaa inta laga xoreynaayo deegano hada ka maqan gacanta Dowlada Somalia.